Armeria - omunye izimbali ezinhle kakhulu futhi usentekenteke ukuthi angamjabulisa iso wensimu iminyaka eminingi. Nge igama layo Celtic angahunyushwa ngokuthi "eduze kolwandle. ' Lokhu akusona isimanga, ngoba owande kakhulu zase-Armero - ngasolwandle. Enye inguqulo ye umsuka igama lesi sitshalo has it ukuthi "armories" French - omunye izinhlobonhlobo carnations, kokuba zifana zase-Armero.
Ngakho, uma ingadi yakho ixazululwe Thrift, ukutshalwa, ukunakekelwa, ukufuya le mbali futhi izici zayo kufanele eyaziwayo kuwe.
Lesi sitshalo iyi-zisetshenziswa ukuthi ikhule kuya ngamasentimitha 50. It has a impande encane. Isiqu iqonde, kungase kube bushelelezi noma pubescent. Izimbali ezincane, ziqoqwa e esidayisa shades ezisukela elimhlophe imajenta, eqoqwe inflorescence. Bakha round "imicamelo" ibhola emise. Ngenxa ekukhuleni kwayo ongaphakeme nokukhanya ingaba njengesihluthulelo "ukhaphethi" endaweni, uma kufanelekile kungaba ngokwanele aminyene. Kubonakala kuhle komakhelwane nge izitshalo ezinwabuzelayo.
Zase-Armero Izimbali kwenzeka ngoMeyi - Agasti. Kunezinhlobo ezingaphezu kuka-60 zama-lesi sitshalo, ezivame kakhulu ezibhekwa turfy, ohlanzekile angasogwini nasemaxhaphozini okulumayo.
Adorn iyiphi engadini kungenziwa uzilungise Thrift. Ukutshala nokunakekela, ikakhulukazi ezikhulayo isidingo sokufunda wensimu phambi wanquma ukuthola ubuhle ukuqhakaza. Kulabo ungafuni ukuthenga izithombo usulungile, kukhona ithuba lentuthuko kusukela imbewu zase-Armero.
Imbewu esiphelweni kungaba kwenziwe izithombo kanye nonseedlings izindlela. Ngo ekhanyayo imbewu itshalwe ngaphambi ubusika noma ekuqaleni kuka-March. Lapho izithombo ezikhulayo kule abamba ukushisa okufanele ke zokutshala senzeka ngoNhlolanja.
imbewu Flower usuhleli izigubhu lokhuni noma le plastic. Uqukethe, endaweni efudumele ezomile. Uma imbewu baye lihluma kancane, basibekela ifilimu noma gauze, udala Isivuvu. Futhi kuphela emva ukuthi amagciwane angaba zidluliselwa ku ekhanyayo.
Lokuzaliswa wenziwa imbewu Armer noma sokuhlukanisa ehlathini. Ezihlabayo abahlukene entwasahlobo noma ekwindla zakuqala, ayifake amanzi elinde ukubukeka izithombo bese etshalwe enhlabathini. isihlahla ngasinye engcono ihlukaniswe izingcezu ezincane ezingaba kalula futhi ngokushesha imile izimpande.
Hlobo luni inhlabathi uthanda Thrift? Ukutshala nokunakekela lokhu imbali kufanele kwenziwe ezindaweni esemanzi, ukukhanya, hhayi enhlabathini ane-alikhali futhi. Indawo kufanele kukhethwe i mhlawumbe nje ukuhwalala ovulekile futhi libalele, okuncane. Umhlabathi kufanele igcinwe ukwesekwa okuxekethile olumanzi, kangcono uma izindawo anesihlabathi enamadwala.
Ukuze ezinye izinhlobo izitshalo zidinga inhlabathi ocebile calcium eningi. Phakathi indawo ukulungiselela ukutshala zase-Armero ukunakwa okukhulu ikhokhelwa amanzi, kusukela imbali akakubekezeleli umswakama sokuzuza izimpande.
isitshalo Undemanding ubhekwa Thrift. Ukutshala nokunakekela kungaba kwenziwe ngezikhathi nesomiso, futhi emakhazeni. Nokho, naphezu kwalokhu, lapho kushisa ezomile izimbali kudingeka uyophuziswa njalo.
Yini enye engase ifunwe zidinga Thrift? Nokunakekela imbali futhi zihlanganisa kokukhulelwa. Yokudla Kwenziwa ngaphambi zom. Ngenkathi, organic umquba amaminerali neqhaza 2-3 izikhathi. ukunakwa okuningi kufanele kukhokhelwe kokusuthisa ngempela, uma Thrift ezikhula Peat, ubumba kanye loamy nenhlabathi.
Uma isayithi lakho ine Thrift, nokunakekela ngeke kuthathe isikhathi esiningi nokuzikhandla, ngoba le mbali iyinhle kangaka ngempela linesizotha. Ngakho ukuthi isitshalo emabele wonke amabutho ayo ekwakhekeni efihlekile entsha ujabule futhi eside isikhathi izimbali, nani nidinga isikhathi ukuze asuse izimbali wilted futhi imbali umoba, okuyizinto ayisekho yakha efihlekile ezintsha.
Lapho Thrift kuyofinyelela ngineminyaka emihlanu ubudala, kufanele siqiniseke okumba, wahlukanise izingcezu eziningana ezincane wathi akahlale phansi. Esikhathini esizayo, lolu hlelo inqubo kumele kwenziwe njalo eminyakeni 2-3, kungenjalo izrastetsya isitshalo.
Njengoba Thrift freezeproof ke ebusika ke akudingi yokukhosela ekhethekile. Kodwa lesi simila akakubekezeleli Ubusika enesithwathwa kancane, soma ezineqhwa, nezikhathi ezimanzi eside. Ngakho-ke, imbali lesifanele utshalwe izinkalo, futhi ebusika ngaphandle kwesembozo iqhwa namahlamvu noma ngesihlahla sonwele ngezidladla.
Kushisa kutuswa humidify amaqabunga imbali.
Kukholakala ukuthi zase-Armero akufanele likhule endaweni eyodwa iminyaka engaphezu kwengu-7-8. Ngakho ukuthi ngemva kwalesi sikhathi lesi sitshalo kungcono ukuba ukufakelwa.
Armeria: zokutshala kanye nokugcinwa endle
Esikhathini ekhanyayo imbewu izitshalo abatshalwé ekwindla noma ngasekupheleni kwentwasahlobo. Top kancane ufafaze phansi. Kubalulekile kakhulu ukugcina imibhede njalo usemanzi, kodwa ukuchelela kumelwe niqaphelisise hhayi iphume imbewu futhi ayingcwabe kubo kude enhlabathini. Ngaphambi kokuhlwanyela imbewu ukugcina cishe isonto elilodwa kule esiqandisini. Ngemva kwalokho, ofakwe amanzi amahora 6-7 bese batshala.
Uma kokwehla ku ekhanyayo akuyona eyenziwa imbewu nezithombo, le zase-Armero akhiwe kude ngamasentimitha 20 kusuka komunye nomunye ukwakha obukhulu imbali ukhaphethi. Ukutshala kufanele kwenziwe imigqa, emseleni engajulile.
Emavikini ekucala emva kokutshala kudinga njalo ukuthambisa luningi. Nokho, ukugwema waterlogging.
Armer esetshenziselwa kokutshala imingcele, rockeries, ematsheni phakathi kwezindonga namatshe amathrekhi.
Kuyinto Azikho isifo noma inkathazo Thrift. Ukutshala nokunakekela kuphela emihlabathini esidi nge amanzi amile ebusika kungaholela yokuthi imbali iba sibuthakathaka ukuze aphid. Ukuze ulwe inkathazo kufanele siqede izitshalo izihlahla. Njengoba kahle ekwelashweni zokuvimbela futhi imbali ngasekuqaleni kwentwasahlobo.
Ngokumangalisayo umbono elihle Armeria maritima. Ukutshala nokunakekela angadingi ulwazi olukhethekile iziqondiso ukulima. Lesi simila kuyinto frost ukumelana ngempela linesizotha. Ngaphansi kwezimo zemvelo, kwandisa eYurophu naseNyakatho Melika ku amagquma kanye ulwandle emikhawulweni. Ukuphakama ingeqi 20 amasentimitha, lezi zimbali Pinkish-purple. Izimbali ihlala cishe lonke ehlobo.
Ngakho, kukhona izinhlobonhlobo eziningi zase-Armero. Bonke bangabangasokile ezahlukene bomoya undemanding, amelana izimo ezihlukahlukene sezulu. Lesi sitshalo kahle bevaleleke esiminyaminyeni sezulu yethu futhi kungaba eziqhakaza zonke ihlobo eside, coexists kahle nezinye imibala. Ngokunakekela ongatheni, lezi zimbali ezintekenteke kuyoba umhlobiso wangempela iyiphi engadini futhi sithokozise iminyaka nawe.
Udweba kanjani iponi. Indlela Dweba "ngoMeyi Little Pony". Udweba kanjani iponi kusukela "Ubungane - kungcono isimangaliso"